Richard Myo Thant, Author at Richard Myo Thant - Page2of 6
Author: Richard Myo Thant
September 28, 2021 September 28, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on FUCK YOU facebook!
384 Pageviews Written by Joe Eifert Dear facebook Fuck you! I never fully trusted you, but now the bucket is full and I stop to be your money pig. You createdasocial platform and turned it into an ads platform. When you first went public in 2012, my data was worth around 100$ (that’sa[…]
September 4, 2021 September 10, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်
142 Pageviews ဒီနေ့ညနေ ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်စားတယ်။ ဒါမလေးရှားကမှာထားတဲ့ ဂေါ်ရခါးညွှန့် ၄ ဒေါ်လာဖိုးကိုအိမ်မှာကြော်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ပွဲဟာ Yunnan ဆိုင်က ၁၄ ဒေါ်လာတန်ထက်များတယ်။ကြုံလို့ဂေါ်ရခါးညွှန့်ရဖို့ အိမ်မှာစိုက်ကြည့်ပုံကိုပြောပြအုံးမယ်။ ဂေါ်ရခါးသီးကို ဘယ်လိုအပင်ဖောက်ရသလဲပြောပြမယ်။ ဂေါ်ရခါးသီးထဲမှာ အစေ့ခပ်ကြီးကြီးတစ်စေ့ပဲပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် အသီးရင့်တာရှာပြီးတော့ ပလတ်စတစ်ဘူး (သို့) ဇလုံထဲမှာ kitchen tower စက္ကူကိုရေဆွတ်ပြီး အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်။ ပြီးရင်လေလုံအောင် ပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ထား။ အများဆုံး (၇) ရက်လောက်ဆိုရင် ဂေါ်ရခါးသီးရဲ့ဖင်ဘက်ကနေ အညှောင့်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ရေလေးဖြန်းဖြန်းပေးပြီး ပလတ်စတစ်နဲ့ပြန်အုပ်ထားရင် မုတ်ဆိတ်တွေလိုပဲအမြစ်တွေ တဖွားဖွားထွက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါများ wikiHow မှာသွားကြည့်ရင်ရတာပဲမလုပ်နဲ့။ သူတို့ပုံဆွဲပြထားတာမှားနေတယ်။ ကျနော်ကကိုယ်တိုင်အပင်ဖောက်လာလို့သိတာ။ wikiHow ထဲမှာ ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကအသီးရဲ့အညှာဘက်ကထွက်တယ်လို့ ပုံတွေဆွဲပြထားတာ လုံးဝမှားတယ်။ အသီးရဲ့ဖင်ဘက်က တဖြည်းဖြည်းကွဲလာပြီး အညှောင့်ထွက်လာရမှာ။ wikiHow ရဲ့ “How-to instructions […]
Once uponatime at U Bein Bridge
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on Once uponatime at U Bein Bridge
184 Pageviews အခုခေတ်ကလေးတွေကို ဒီနေရာဟာ ဘာဆိုင်မှမရှိတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ပြောရင် ယုံကြမယ်မထင်ဘူး။
Facebook Dog Language
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on Facebook Dog Language